Fahafahana misondrotra any an-dàlam-barotra, any an-tsena ary any ambany hivoahan'ny varotra ho an'ny fandraharahana. Martech Zone
Raha nanontany ny ankamaroan'ny olona hoe aiza no ahitan'izy ireo ny mpihaino azy dia matetika ianao no mahazo valiny tery tokoa. Ny ankamaroan'ny hetsika fanaovana doka sy varotra dia mifandraika amin'ny safidin'ny mpivarotra ny dia ny mpividy… Saingy efa tara loatra ve izany?
Raha misy ianao fifanakalozana nomerika mafy orina; Ohatra, azonao atao ny mameno ny antsipiriany rehetra ao anaty takelaka amin'ny alàlan'ny fijerena fotsiny ireo vinavinanao ankehitriny sy famerana ny tenanao amin'ireo paikady hainao. Azonao atao ny manao fikarohana teny lakile ary mampifantoka ny sainao amin'ny motera fikarohana ho an'ireo mpampiasa mitady izany masoivoho fanovana nomerika, mpanolotsaina paikady nomerika, orinasam-panatanterahana orinasa, Etc.
Mandrosoa ny dian'ny fivarotana fividianana B2B
Tsy ny anao irery no resahina mpihaino. Izy io koa dia momba ny mpanjifanao ankehitriny, ny hetsiky ny onjan'ny prospect anao, ary ny hetsika ataon'izy ireo any ambany.
Miverina amin'ny ohatry ny orinasa mpanolo-tsaina fanovana nomerika. Raha mahazo famatsiam-bola lehibe ny orinasa mba hampisondrotra ny fikambanan'izy ireo… dingana iray lehibe amin'izany dingana izany ny fampiasam-bola amin'ny fanovana nomerika. Na, raha voahodina ao anaty fikambanana ny mpiasa manan-danja, dia mety hitady hanova ny zavatra niainan'ny mpanjifany ny mpitarika vaovao.
Ka raha orinasa fanovana nomerika aho dia tombontsoako manokana ny manorina fifandraisana amin'ireo orinasa any ambony. Ity dia mety misy:
Orinasa mitrandraka renivohitra - Ny fanomezana famelabelarana ho an'ny mpanjifan'ny VC dia fomba iray lehibe hananganana fahatsiarovan-tena sy hampianarana ireo mpanjifa ho avy.
Orinasa mifangaro sy manangona - ny fanomezana fikarohana sy fanabeazana ho an'ny orinasa M&A dia mety indrindra. Rehefa mampifangaro sy mahazo mpanjifa izy ireo dia hanana fanamby hifototra amin'ny traikefa niomerika.
Mpisolovava sy mpitan-kaonty - iray amin'ireo dingana voalohany raisin'ny orinasa rehefa miakatra izy ireo dia ny fiaraha-miasa amin'ireo solontenan'ny lalàna sy ara-bola.
Orinasa mpikarama - Ireo orinasa izay mihena na manana fihenam-bidy amin'ny toeran'ny mpitarika dia matetika miara-miasa amin'ireo matihanina mandray mpiasa hitondra talenta ao anatin'ny fikambanana.
Karazan'asa inona no azonao iaraha-miasa miaraka amin'ireo izay ho mpanjifanao ho avy?
Manome tolotra fanampiny ho an'ny mpanjifanao ankehitriny
Iray amin'ireo hafatra mahasosotra indrindra handrenesana amin'ny mpanjifa ny hoe: “Tsy fantatray fa ny orinasanao no nanome an'izany!” rehefa avy henonao ny vaovao fa nanao sonia fifanarahana tamina orinasa hafa ry zareo.
Dingana iray lehibe amin'ny fidirana an-tsambo ny mpanjifanao dia ny fampitana ny vokatra rehetra, ny serivisy ary ny fotoana ahafahan'ny mpiara-miasa atolotra azy ireo. Satria efa manana fifandraisana matanjaka amin'ny orinasa ianao, mety efa voatanisa ao amin'ny rafitry ny kaonty momba ny fandoavam-bola, efa nilahatra mena ny fifanarahana momba ny serivisinao… matetika dia mora ny manitatra ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo.
Ny fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana hafa atokisanao dia matetika fotoana mety hananganana lanja sy hitondrana fidiram-bola mihitsy aza. Izahay dia manana firotsahana an-tsokosoko amin'ny orinasa maro izay fantatray ary atokisantsika hanao asa tsara ho an'ny mpanjifanay. Paikady fandresena ho an'ny mpanjifanao sy ny volanao manokana.
Inona ireo orinasa mpiara-miasa fantatrao sy atokisanao fa azonao ampahafantarina ny mpanjifanao? Manana fifanarahana momba ny referansa miaraka amin'izy ireo ve ianao?
Fahazoana loharano an-dàlambe ho an'ny mpanjifanao ankehitriny
Aorian'ny nahavitanay ny fampiharana tamin'ny mpanjifa dia matetika izy ireo no mifandray amin'ny mpamatsy rindrambaiko hiteny amin'ny fihaonambe, handray anjara amin'ny dinidinika ary hatonina amin'ny famoahana indostrialy.
Satria nanome traikefa miavaka ho an'ny mpanjifanao ianao, makà fotoana hiarahana miasa amin'izy ireo amin'ny fotoana fampiroboroboana. Ny orinasam-pifandraisanao amin'ny daholobe dia tokony hiasa mba hahafahan'izy ireo miteny miteny ary ny ekipa mpivarotra anao dia tokony hanampy azy ireo lahatsoratra ho an'ny mpitarika ao amin'ny tranokala indostrialy.
Rehefa mahazo an'izany izy ireo dia voajanahary fotsiny raha voatonona ao anaty ny atiny omena azy ny orinasanao. Satria tsy mandeha izy ireo ho an'ny ianao na tsy nandoa by ianao, miresaka amin'ny mpijery ho toy ny fahefana sy mpiara-miasa matoky izy ireo. Io karazana fanentanana ho an'ny mpanjifa io dia hitondra fahatsiarovan-tena mahavariana amin'ny asa ataonao.
Ahoana ny fomba hanampianao ny mpanjifanao hampiroborobo ny fahombiazany amin'ny fiaraha-miasa aminao? Inona avy ireo loharanom-pahalalana azonao omena azy ireo amin'izany dingana izany hanentanana ny sainao ho an'ny orinasanao?
Fa maninona no maika any amin'ny toerana iray misy ny mpifaninana aminao? Manomboha miasa ambony, ambany ary manoloana ireo mpanjifanao ankehitriny mba hitarika hetsika bebe kokoa mankany amin'ny farany ambany.
Tags: b2bmarikadia ny mpividyfamolavolanaambanymarketing any ambanymampihiditra barotraKonferansa momba ny marketingFivarotana finday sy tabletteMobile Appstambajotrafiaraha-miasafifaneraseranaFampisehoanamanokana eo ambonymarketing any ambonyWebinars
Sqribble: kitiho, famolavolana ary famoahana ny boky momba anao manokana, fandalinana tranga, na whitepapers ao anatin'ny minitra